Meelaha ugu badan ee Al Shabaab Muqdisho uga dhuumaaleystaan oo la ogaaday (Akhriso) - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Meelaha ugu badan ee Al Shabaab Muqdisho uga dhuumaaleystaan oo la ogaaday (Akhriso)
Apr 11, 2019 - Comments off
Xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda baaritaan adag oo ay wadaan Ciidamada amniga Soomaaliya waxaana habeenada qaar ay Ciidamada u dhacaan guryo ay dagan yihiin dad shacab ah.
Ciidamada amniga ayaa u dhaca xaafadaha qaar waxaana guryo ay galeen ay ka soo qabteen dad badan oo qaarkood hore uga tirsanaa Al-Shabaab sida ay sheegayn hey’adaha amaanka.
Saraakiisha amaanka ayaa sheegay in ay isha ku haayaan islamarkaana ay baarayaan dadka ku nool xaafado qaar oo katirsan degmooyinka Gobalka Banaadir.
Meelaha ugu bdan oo ay baarayaan Ciidamada amniga waa xaafadaha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahan Tareedisho, Garasbaalay, iyo Ceelasha Biyaha waxayna halkaasi ka soo qabtay ugu yaraan 10 qof uu kamid yahay Af-hayeenkii hore ee odayaasha dhaqanka ee C/llaahi Dheere.
Sidoo kale waxaa muuqata in ay Ciidamada si gaar ah wax uga baarayaan xaafadaha Caymiska, Suuqa Xoolaha, Bakaaraha, Warshadaha iyo goobo kale oo ay ku laa-laabtayn Ciidamo dharcad ah iyo kuwa fuliya howlgalka gaarka ah sida ay sheegayn mas’uuliyiinta amniga.
Xaafadaha ay Ciidamada ay ku laalaabteen ayaa la sheegay in shaki badan looga qabo in Al-Shabaab ay ku badan yihiin ayna ka soo abaabulaan howlgalada ka dhanka ah Ciidamada amniga iyo hey’adaha Dowladda Soomaaliya.
Goobaha aan soo sheegnay iyo meelo kale ayaa ah goobo ay ka caaganyihiin wax u shaqeeya Dowladda Soomaaliya, sida Ciidamada iyo shaqaalaha Dowladda waa aag aad looga cabsado waxa ayna kamid yihiin Xaafado aysan ku dhawaanin dadka Dowladda ku lug leh islamarkaana lagu tiriyo Aagga Al-Shabaab ku badan yihiin ee Muqdisho.